အသည်းကြီးခြင်း | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
အသည်းဟာ ပုံမှန်အရွယ်အစားထက်ကြီးနေပြီဆိုပါက ရောဂါအမျိုးမျိုးရဲ့ လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အသည်းရောဂါကြောင့် အသည်းကြီးနိုင်သလို အခြားအကြောင်းအရင်းများကြောင့်လည်း ဖြစ်နို်ပါတယ်။ ၎င်းတို့မှာ -
- ဘက်တီးရီးယား၊ ဗိုင်းရပ်စ်၊ ကပ်ပါး
- မျိုးရိ်ုးဗီဇနှင့်ဆိုင်သော ရောဂါများ
သပ်ပုံသဏ္႑ာန်ရှိ၍ ဝမ်းဗိုက်ညာဘက်အပေါ်ပိုင်းတွင်တည်ရှိသော အသည်းသည် ခန္ဓာကိုယ်တွင်းကလီစာများထဲတွင် အကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူတစ်ဦးရဲ့ အသည်းအလေးချိန်ဟာ 1.2 မှ 1.5 ကီလိုဂရမ်ထိရှိပြီး 15 စင်တီမီတာခန့် ကြီးပါတယ်။ ရောဂါတစ်ခုခုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အခြားရောဂါလက္ခဏာများမရှိဘဲနှင့် အသည်းကြီးတယ်ဆိုတာကတော့ လုံးဝဖြစ်တောင့်ဖြစ်ခဲပါ။
- အရက်သောက်ခြင်းဖြစ်သော အသည်းရောဂါအမျိုးမျိုး (အသည်းအဆီဖုံးခြင်း၊ အသည်းရောင်ခြင်း၊ အသည်းခြောက်ခြင်း)
- အရက်ကြောင့်မဟုတ်သော အသည်းရောဂါများ၊ လူမှုနေထိုင်မှုပုံစံနဲ့ ဆက်စပ်နေသော ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်ရောဂါများ
- အသည်းရောင်အသားဝါပိုး A, B, C, D, E
- အသည်းကင်ဆာ (သို့) အခြားနေရာတစ်ခုမှ အသည်းသို့ကင်ဆာဆဲလ်များ ပျံ့နှံ့လာခြင်း
အခြားဖြစ်လေ့ဖြစ်ထမရှိတဲ့ အသည်းရောဂါအများစုကလည်း အသည်းကြီးခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်သည့်အပြင် အခြားရောဂါများကြောင့်လည်း အသည်းကိုသွယ်ဝိုက်၍ ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ ၎င်းရောဂါအချို့မှာ -
- ကြွက်သားများအတွင်း သကြားဓာတ်မဖြိုခွဲနိုင်သောရောဂါ
- Gaucher ရောဂါ (glucocerebrosidese အင်ဇိုင်းတစ်မျိုးချို့တဲ့သောရောဂါ)
- အသည်းကိုသွေးထောက်ပံ့သော သွေးလွှတ်ကြောပိတ်ခြင်း
- နှလုံးအဆို့ရှင် ကျဉ်းခြင်း
- ကပ်ပါးပိုး (သို့) ဘက်တီးရီးယားများကြောင့်ဖြစ်သော အသည်းပြည်တည်နာ
- အခြားကပ်ပါးပိုးများ (schistosomiasis, fascioliasis)
- သန်း၊ ရှပိုးများကြောင့် မကြာခဏဖျားနာခြင်း
- ပါရာစီတမောကဲ့သို့ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးအချို့နဲ့ ပဋိဇီဝဆေးအချို့သည်လည်း အသည်းကိုဒဏ်ရာရစေနိုင်ပါတယ်။
- စက်ရုံမှ ဓာတုပစ္စည်းများကဲ့သို့ အဆိပ်အတောက်များနှင့်ထိတွေ့ခြင်း
- အသားဓာတ်များ အမျှင်သဏ္႑ာန်ဖြင့် စုပုံခြင်း (Amyloidosis)
- ခန္ဓာကိုယ်မှ ပြန်လည်တိုက်ခိုက်ခြင်းကြောင့်အသည်းရောင်ခြင်း
- သည်းခြေကြောင့် အသည်းခြောက်ခြင်း
- သည်းခြေပြွန်ကျဉ်းခြင်းကြောင် သည်းခြေရောင်ခြင်း
အသည်းပြဿနာပိုမိုဖြစ်ပွားစေနိုင်တဲ့ အချက်တွေကတော့ -
- ဗီတာမင်၊ ဆေးများ (သို့) ဖြည့်စွက်အားဆေးများကို ဆေးညွှန်းထက် ပိုမိုသောက်သုံးခြင်း
- ဆေးဖက်ဝင်သောအပင်များ (Confery, ma huang, mistletoe)
အသည်းကြီးခြင်းသည် အချိန်အတော်ကြာအောင် သတိမမူမိဘဲ ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ အများအားဖြင့် အခြားပိုမိုထင်ရှားတဲ့ရောဂါလက္ခဏာများကြောင့် ဆရာဝန်နှင့်သွားရောက်ပြသရာမှ တွေ့ရှိရတတ်ပါတယ်။
စမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်းဖြင့် အသည်းအရွယ်အစား၊ မျက်နှာပြင်နဲ့ အကျိတ်အလုံးရှိ/မရှိတို့ကို သိနိုင်ပေမယ့်လည်း ပိုမိုတိကျစွာသိလိုပါက ဝမ်းဗိုက်တယ်လီဗွီးရှင်းဓာတ်မှန် စတဲ့စစ်ဆေးခြင်းမျိုးကိုစတင်လုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်။ ထို့ထက်ပို၍ ထင်ရှားစွာမြင်လိုပါက ကွန်ပျူတာဓာတ်မှန် (သို့) သံလိုက်ဓာတ်မှန်ရိုက်လို့ရပါတယ်။
- သွေးစစ်ခြင်း -အသည်းအင်ဇိုင်းပမာဏကို သိရှိစေရန်သွေးစစ်ခြင်း၊ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးများကို စစ်ဆေးခြင်း (ဥပမာ - အသည်းရောင်ပိုး)
- သံလိုက်စွမ်းအင်သုံးစက်ကိုအသုံးပြု၍ အသည်းတစ်သျှူးများ မာခြင်းရှိ/မရှိ ကိုသိစေနိုင်ပါတယ်။ ၎င်းစစ်ဆေးမှုသည် နာကျင်ခြင်းမရှိတဲ့အပြင် အသည်းမှအသားစယူခြင်းအစား အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
အသည်းမှအသားစယူကြည့်ခြင်း - သေးငယ်ရှည်လျားတဲ့ အပ်ကိုအသုံးပြု၍ အရေပြားမှတဆင့် အသည်းအတွင်းသို့ဖောက်ကာ တစ်သျှူးစကို ဆွဲထုတ်ပြီး ဓာတ်ခွဲခန်းသို့ပေးပို့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
♦ ကုသခြင်းနှင့် ဆေးဝါးများ
ဖြစ်ပွားရတဲ့အကြောင်းအရင်းပေါ်မူတည်၍ ကုထုံးမှာလည်း ကွဲပြားခြားနားပါတယ်။ အဖြစ်များတဲ့ အကြောင်းအရင်းတွေဖြစ်တဲ့ အရက်ကြောင့်ဖြစ်သော အသည်းရောင်ခြင်းနဲ့ အရက်နဲ့ဆက်စပ်မှုမရှိဘဲ အသည်းအဆီဖုံးခြင်းရောဂါတို့ဟာ အရက်မသောက်တော့ဘဲ အာဟာရရှိအောင်စားသောက်ခြင်း၊ လေ့ကျင့်ခန်းပုံမှန်ပြုလုပ်ခြင်းနဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချခြင်းများဖြင့် ချက်ချင်းသက်သာပျောက်ကင်းစေနိုင်ပါတယ်။
1. ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ အစားအစာများ (သစ်သီး၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်နဲ့ အစေ့အနှံ)ကိုသာ ရွေးချယ်စားသောက်ပါ။
2. အရက်ကိုတော်သင့်ရုံသာ သောက်သုံးပါ။
3. ဆေးဝါးများ၊ ဗီတာမင်များနဲ့ ဖြည့်စွက်အားဆေးများသောက်သုံးတဲ့အခါ အညွှန်းအတိုင်းလိုက်နာပါ။ ထို့ထက်ပို၍မသောက်သုံးမိစေရန် သတိပြုပါ။
4. ဓာတုပစ္စည်းများဖြင့် မထိတွေ့မိစေရန်ဂရုပြုပါ။ ပိုးသတ်ဆေး၊ သန့်စင်ဆေးရည်နဲ့ အခြားအဆိပ်ရှိတဲ့ ဓာတုပစ္စည်းတွေကို လေဝင်လေထွက်ကောင်းတဲ့နေရာမှာသာ အသုံးပြုပါ။ ထို့ပြင် လက်အိတ်၊ အကျႌလက်ရှည်နဲ့ မျက်နှာဖုံးများဝတ်ဆင်ပါ။
5. ကိုယ်အလေးချိန်ကိုထိန်းသိမ်းပါ။ ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့လိုပါက နေ့စဉ်စားသုံးနေတဲ့ ကယ်လိုရီကိုလျှော့ချ၍ လေ့ကျင့်ခန်းကိုတိုး၍ပြုလုပ်ပါ။ နည်းလမ်းမှန်ကန်စွာ အလေးချိန်လျှော့ချနိုင်ရန် ဆရာဝန််ထံမှအကြံဉာဏ်ရယူနိုင်ပါတယ်။